Ukusetyenziswa komatshini we-ems
IMagshape inokwakha ikhonkco ukomeleza izihlunu ezingundoqo, kubandakanya izihlunu zesisu zesisu esikhulu semisipha (imisipha yesisu esiswini, umsipha wangaphandle oblique, umsipha wangaphakathi we-oblique, umsipha wesisu ojikelezayo) kunye ne-gluteus maximus kwisihlunu esincinci esisezantsi. Imisipha engundoqo inokukhusela umqolo, Gcina uzinzo kwesiqu, ugcine indlela echanekileyo yokuma, ukuphucula amandla okuhamba kunye nokunciphisa amathuba okonzakala, ukubonelela ngenkxaso yolwakhiwo kuwo wonke umzimba, kunye nokwenza ulutsha.
Uncedo lomatshini wokukrola ems
(1) IMagshape sisixhobo esisebenzayo esisebenzayo ekubunjweni komzimba nakwisixhobo sokwakha izihlunu. Kukulungele ukunciphisa, ukubumba, ukufumana izihlunu, ukunyibilika kwamanqatha, ukusebenzisa imigca yevesti kunye nokuphakamisa isinqe, kulungile kwimpilo.
(2) isebenza ngakumbi kwiimpundu kunye nesisu. Isebenzisa itekhnoloji ye-elektroniki egxile kakhulu (HIFEM) kwitekhnoloji ye-elektroniki yokunyusa ukugqabhuka kwexesha elincinci lokuqina kwesisipha, okukhokelela ekwandeni koxinano lwemisipha, ukunciphisa ivolumu, ukucaca okuphuculweyo kunye nokuphucula ithoni. kwaye utshise amanqatha, kwaye yeyona ndlela iphambili yehlabathi engangenisiyo yokunyusa isinqe.
(3) Ngokunciphisa amanqatha esiswini kwaye kwangaxeshanye ukuseka isiseko semisipha phantsi kwamafutha, nceda izigulana zifezekise umthambo omncinci kunye neembaleki zomzimba.
(4) Xa isetyenziswa ezinqeni, inokunika isigulana imilo emva kokuzilolonga. Kodwa umgaqo wokufudumeza / wokupholisa awusetyenziswanga, ke akukho bungozi bokutsha, amanxeba okanye ukudumba.
(5) Isicwangciso sonyango esinconyelweyo kukukwenza unyango-lwemizuzu engama-30 kwiiveki ezimbini. Iziphumo ezilungileyo ziya kubonakala emva kweenyanga ezintathu, kwaye ziya kuqhubeka ukuphucula emva kweenyanga ezintandathu.
(6) Inokomeleza izihlunu ezinobungangamsha okanye izihlunu zesisu kwaye itshise amanqatha ngelixa igcina.
Iindlela ezintathu zomatshini wemagshape
IMODE YOMDLALO + YENDLELA YOBUCHULE + IMODE YOBUNGCALI
iparameter yomatshini we-ems
Umbane we-Electromagnetic (Amandla)
Umntu woQhakamshelana naye: Ilanga uZhao, uAlex Song
Imeyile: Sunny@sanhebeauty.com, Alex@sanolasers.com
Egqithileyo I-Pinxel Fractional RF Microneedle Isixhobo esineenaliti ezifakelweyo / i-CE evunyiweyo kumgangatho oqhelekileyo umatshini weRF kumatshini wobuso
Okulandelayo: Intengiso eshushu ye-2021 yomsinga werediyo eqhekeza umatshini wokuqinisa ulusu
Hi-Emt Ukubumba umzimba
Umatshini wokwakha izihlunu
Umatshini weMiscle Sculpt
Umatshini wokukhuthaza izihlunu
Umatshini wokukrola womzimba
Umatshini weMisipha oShukumisayo
Umzimba ophathekayo ukrola izihlunu ems tesla sculpt ...
Hi-Emt 4 iintloko EMS umzimba sculpt kwezihlunu ubuhle ma ...
Ukususwa kwamabala amabala, Umatshini weLaser we-Co2, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems, Ubuhle be-CO2 Laser, Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele, Shr IPL Khetha,